कपालमा चायाँ ल’ठ्ठिएर दि’क्क हुनुभएको छ ? छु’टकारा पाउन यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस् ! – Gandaki Chhadke
काठमाडौँ । व्यक्तिमा चाँयाको स’मस्या हुन्छ । यसको उपचार गर्नका लागि विभिन्न उपायहरु अ’पनाउने गरिन्छ । कुनै पनि उपायको वास्तविक कारण न’जानी गरिने उपचारले कपाल झनै वि’गार्ने गर्छ ।चाँयाको मुख्य लक्षण कपाल झ’र्ने र चि’लाउनु हो । यो स’मस्या कपालमा हुने मृत को’शिकाहरुबाट पैदा हुन्छ । विशेषज्ञका अनुसार यो स’मस्या ती व्यक्तिहरुलाई धेरै हुन्छ जो कपाललाई सही ढंगले सफा गर्दैनन् ।यसका साथै, तेलको कमी, त’नाव, ह’र्मोनको स’मस्या, खानपान जस्ता पोषक तत्वको अ’भाव साथै बारम्बार पानी परिवर्तन गर्दा पनि चाँया पर्न सक्छ ।१।तिल र कपूरको पेस्ट स् कपूरको प्रयोग प्रायः पूजाको सामाग्रीमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
तर, हप्तामा एकपटक तिलमा कपूर मिसाएर बनाएको पेष्ट कपालमा लगाउँदा चाँयाको स’मस्या कम गर्छ ।२.ग्रीन टीबाट बनेको पेस्ट: शरीरको तौल फिट रहनका लागि ग्रीन टी निकै फा’इदाजनक हुन्छ । तर कपालमा राम्रोसँग स्याम्फु गरिसकेपछि हप्तामा २ वा ३ पटक ग्रीन टीको ब्याग कपालमा राखेर मसाज गर्दा कपाललाई निकै ला’भ पुग्छ र चाँया हराउँछ ।३.प्याजको रस : स्वाद बढाउन प्रयोग गरिने प्याजबाट रस निकालेर कपालमा मा’सिल गर्दा चाँयाबाट मु’क्ति मिल्छ । प्याजको र’स बनाएर कचौरामा राख्ने र औँलाको सहायताले कपालको जरामा लगाउने र सुकेपछि पखाल्ने गर्दा कपालको सु’ख्खापन हराउँछ ।
४.चु’कन्दरको पेस्ट: चु’कन्दर सामान्यतयाः स’लादको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तर यसको पेष्ट कपालको लागि निकै फा’इदाजनक हुन्छ । यसको पेस्ट लगाउँदा कपालको जरामा हुने सु’ख्खापन हराउँछ । चु’कन्दर पि’सेर कपालमा लगाउने र २० मिनेटसम्म राख्ने र पेस्ट सु’क्न दिने । त्यसपछि कपाल राम्रोसँग धुने । यसले कपालको जरामा हुने सबै स’मस्या कम हुन्छ ।५.नीम र दहीको पेस्ट: नीमको से’वले र’गत सफा हुन्छ । तर, दहीमा नीमको पातको पेस्ट बनाएर कपालमा लगाउँदा कपाल झ’र्न कम हुन्छ भने छिट्टै कपाल फु’ल्ने स’मस्या पनि कम हुन्छ । साथै, चाँया पनि ह’राउँछ ।